नैतिकता र स्थिरता – Shekou Woman
हाम्रो मिशन डिजाइन बनाउन छ किफायती टुक्रा तपाईं महसुस गर्न सुन्दर छ । हामी स्रोत सबैभन्दा सुन्दर र दिगो कपडे ल्याउन सम्भव ती डिजाइन जीवन चाँडै, त्यो आएको छैन मा एक विशाल लागत तपाईं वा ग्रह ।
चयन गर्दा, कपडे, हामी लिन ध्यानमा पानी इनपुट, ऊर्जा इनपुट, भूमि प्रयोग, पर्यावरण-विषाक्तता, ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सर्जन, मानव विषाक्तता, उपलब्धता र मूल्य.
हाल लगभग 10% को हाम्रो संग्रह गर्व प्रयोगTENCEL™ Lyocell फाइबर. TENCEL™ Lyocell फाइबर प्राप्त गरेका एक प्रशंसनीय प्रतिष्ठा लागि आफ्नो पर्यावरण जिम्मेवार बन्द पाश उत्पादन प्रक्रिया, जो transforms काठ लुगदी मा cellulosic फाइबर संग उच्च संसाधन दक्षता र कम पर्यावरण प्रभाव छ । यो विलायक-कताई प्रक्रिया recycles प्रक्रिया पानी र reuses को विलायक मा पुन को दर भन्दा बढी 99%. उपभोक्ताहरु गर्न सक्छन् भन्ने आश्वासन आफ्नो फैशन विकल्प छैन योगदान गर्न मा एक प्रतिकूल प्रभाव वातावरण छ ।
हामी पनि बनाउन को उद्देश्य को 75% हाम्रो लुगा संग प्राकृतिक वा पुनर्नवीनीकरण फाइबर (अक्षय, बोट-आधारित र संभावित लागि circularity) वा लगभग सबै प्राकृतिक फाइबर.2025 द्वारा, हामी लक्ष्य बनाउन 100% हाम्रो वस्त्र देखि प्राकृतिक वा पुनर्नवीनीकरण फाइबर.
हामी सिद्ध छैनन्, तर हामी राखे स्थिरता को कोर मा सबै हामी के.
यहाँ केही तरिकाहरू छन् हामी प्रयास दिगो हुन:
हामी कार्यान्वयन waitlist उत्पादनहरु गर्न हाम्रो स्टोर गर्न हामीलाई अनुमति कम राशि को अधिक सूची हामी उत्पादन । यो गर्न योगदान गर्नेछ कमी को फोहोर उत्पादन को फैशन उद्योग मा हरेक वर्ष ।
कुनै जन उत्पादन
We don ' t जन उत्पादन । हाम्रो उत्पादनहरु को सबै छन् उत्पादित अत्यन्तै सीमित उत्पादन चल्छ ।
, औसत मा, ई-कमर्स प्रयोग बारे मा 30% भन्दा कम ऊर्जा परम्परागत खुद्रा.
We are committed to achieving निष्पक्ष, सुरक्षित र स्वस्थ काम गर्ने वातावरण भर हाम्रो आपूर्ति श्रृंखला । हाम्रो कारखाना अवस्था को उच्च स्तर छन् र लगातार निगरानी रूपमा - छ आनन्द र भलाई को टीम छ । सबै कामदारहरूको भुक्तानी एकदम अनुसार आफ्नो कौशल स्तर र भूमिका छ । हामी खोज्न साथी संग कारखानों साझेदारी गर्ने एक साधारण दर्शन ।
राख्न हाम्रो आपूर्ति श्रृंखला रूपमा दिगो रूपमा सम्भव छ, हामी पक्का हाम्रो कपडा आपूर्तिकर्ता शेयर हाम्रो स्थिरता दर्शन र हामी सक्दो प्रयास गर्न मात्र प्रयोग प्राकृतिक फाइबर.
हामी तिर काम गर्दै छन् हाम्रो प्याकेजिङ्ग भइरहेको प्लास्टिक मुक्त!हाम्रो लुगा बैग बनेका छन् 100% सनी र गर्दै छन् 100% reusable. हामी हाल मानक प्रयोग गर्ने र संरक्षण बैग रूपमा हामी अझै पाउन एक सिद्ध समाधान गर्दैन वृद्धि ढुवानी लागत र सम्पूर्ण टिकाउ र पनरोक छ । तर हामी चाहन्छौं यो राम्रो हुन । भने जो कोहि चाहन्छ संग काम गर्न अमेरिकी विकास गर्न पनि अधिक जादुई प्याकेजिङ्ग समाधान गरौं, गरेको च्याट.
नैतिक व्यापार नीति
Shekou चाहिन्छ त्यो सबै आपूर्तिकर्ता संग पालन हाम्रो आचरण को कोड.
1.1 त्यहाँ हुनेछ कुनै forced labour.
कुनै आपूर्तिकर्ता मा संलग्न हुनेछ वा समर्थन को प्रयोग बाध्य वा अनिवार्य श्रम. कुनै आपूर्तिकर्ता गर्छु कायम मूल पहिचान कागजात र हुनेछैन आवश्यकता कर्मियों तिर्न 'जम्मा' को संगठन मा commencing रोजगार.
कुनै आपूर्तिकर्ता मा संलग्न हुनेछ वा प्रयोग समर्थन बाल श्रम 16 वर्ष उमेर अन्तर्गत, जबसम्म न्यूनतम उमेर लागि काम वा अनिवार्य शिक्षा द्वारा उच्च छ स्थानीय कानुन, जो मामला मा उच्च उमेर लागू हुनेछ. आपूर्तिकर्ता प्रमाणित गर्नुपर्छ उमेर को सबै कर्मचारीहरु र कायम प्रतिहरू आफ्नो कामदारहरूको को प्रमाण उमेर ।
1.3 मान्छे उमेर 18 वर्ष हुन पर्छ कार्यरत राती वा खतरनाक अवस्था हो ।
कुनै आपूर्तिकर्ता हुनेछ रोजगार को उमेर अन्तर्गत कुनै 18 समयमा काम गर्न रात । खतरहरुको समावेश हुनेछ, तर सीमित हुन; आगो सुरक्षा, भवन, सुरक्षा, मिसिन सुरक्षा, रासायनिक, सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा ।
1.4 त्यहाँ कुनै भेदभाव
आपूर्तिकर्ता हुनेछ भेद गर्नु छैन, राखने मा प्रशिक्षण, पदोन्नति, समापन वा अवकाश उमेर मा आधारित, लिङ्ग, जाति, जात, राष्ट्रिय मूल, धर्म, अशक्तता, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिमुखीकरण, संघ सदस्यता वा राजनीतिक संबंध
2.1 सबै ज्याला पूरा हुनेछ स्थानीय न्यूनतम मानक छ ।
ज्याला हुनेछ कम्तिमा पूरा गर्न पर्याप्त आधारभूत आवश्यकता को सबै कर्मचारीहरु ।
2.2 घण्टा काम प्रति हप्ता भन्दा बढि हुनेछ अधिकतम घण्टा द्वारा स्थापित स्थानीय व्यवस्था
सामान्य र ओवरटाइम घण्टा भन्दा बढि हुनेछ अधिकतम घण्टा द्वारा स्थापित स्थानीय व्यवस्था, र कामदारहरूको प्राप्त गर्न छोड्न entitlement को कम्तिमा एक दिन बन्द काम प्रति हप्ता.
2.3 अत्यधिक ओवरटाइम निषेध छ ।
काम घण्टा नाघ्न हुँदैन 55 घण्टा मा कुनै पनि7दिन अवधि ।
3.1 एक सुरक्षित र स्वच्छ वातावरण काम गर्छु प्रदान गर्न सकिन्छ.
सबै आपूर्तिकर्ता खोल सुनिश्चित कुनै पनि र सबै काम स्थानहरू पूरा सबै स्थानीय स्वास्थ्य र सुरक्षा नियमहरू मा आफ्नो आदर उद्योग साथै take precautions to prevent any दुर्घटना वा स्वास्थ्य दुर्घटना ।
3.2 पहुँच गर्न बाथरूम र सफा पानी shall be provided
4.1 कुनै कठोर वा inhumane treatment अनुमति दिएको छ
शारीरिक, मौखिक र यौन दुर्व्यवहार वा धम्की निषेध छन्.
4 संघ को स्वतन्त्रता र अधिकार, सामूहिक सम्झौता
4.1 सबै आपूर्तिकर्ता हुनेछ चिन्न सही गर्न कर्मचारीहरु संघ को स्वतन्त्रता र अधिकार, सामूहिक सम्झौता.